Wohler ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Carl Dempsey သည် IABM ၏ပြည်နယ်နံနက်စာကို ၂၀၁၄ တွင်တက်ရောက်မည် NAB Show | NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Wohler CEO ဖြစ်သူတဲ့ Carl ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ 2014 NAB ပြရန်မှာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနံနက်စာ၏ IABM ပြည်နယ်တို့အတွက်ဟောပြောအဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရန်
Wohler CEO ဖြစ်သူတဲ့ Carl ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ 2014 NAB ပြရန်မှာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနံနက်စာ၏ IABM ပြည်နယ်တို့အတွက်ဟောပြောအဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရန်
San Francisco - မတ်လ 31, 2014 - Wohler Technologies က ယနေ့သူ Carl ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ, ကုမ္ပဏီ၏ CEO, ထိုစဉ်ကတစ်ဦး panel ကဆွေးနွေးမှုတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် IABM တနင်္လာနေ့တွင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနံနက်စာ၏နှစ်ပတ်လည် NAB ပြည်နယ် (အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး), ဧပြီ 7, အ 2014 ၏ပထမဦးဆုံးနေ့က NAB ပြရန်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ၏သူချင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဘရိုင်ယန် CRAM join ပါလိမ့်မယ် Dejero Labs က, Miranda ၏ Marco လိုပက်ဇ်နှင့်များ၏ချာလီ Vogt ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ နှင့် GatesAir ။ အားဖြင့်7နံနက်တင်ဆက်မှု: အဆိုပါ panel ကဆွေးနွေးမှုတစ် 30 လိုကျပါမညျ IABM ယင်းအပေါ် CEO ဖြစ်သူ Peter White IABM'' s ကိုနောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေး။
"အကြောင်းအရာစားသုံးမှုအလေ့အထများ၏လျင်မြန်စွာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့သူတို့ကိုမီဒီယာနည်းပညာကိုထောက်ပံ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းအပြောင်းအလဲမောင်းနှင်နေပါတယ်" ဟုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီကပြောပါတယ်။ "ပတေရုလက်ဆောင်ပြတ်သားအာရုံသို့ဤပြောင်းလဲဆောင်ကြဉ်းနှင့်နည်းပညာထောက်ပံ့ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ဦးတည်ချက်အပေါ်တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောပေးတဲ့ dialog များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များကိုလိမ့်မည်။ အဆိုပါဒေတာကို"
အဆိုပါ IABM ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာနည်းပညာရောင်းချသူအဖြစ်ထောက်ပံ့ရေး-side စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေး၏ဦးဆောင်အရင်းအမြစ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိအတင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း White ကစီးပွားရေးရာသီဥတုအကြောင်းကို key ကိုဒေတာကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီနှင့် panel ကို၏ကျန်ဒီထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးနှင့်အရေးပါသောကိစ္စရပ်များတွင်အတွက်အလေးချိန်ပါလိမ့်မယ်။ ယောဟနျသ Ive, အမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး IABM, က Moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ IABM နံနက်စာအတွက် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၏အခန်းတစ်ခန်း N232 အတွက်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် IABM website က: www.theiabm.org။ Wohler နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာရရှိနိုင် www.wohler.com.
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ Wohler ရဲ့အစဉ်အလာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံး In-ထိန်သိမ်းအသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အချက်အလက်စောင့်ကြည့်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ဖန်တီးမှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့် signal ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကုမ္ပဏီ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ယနေ့ဆက်လက်နှင့်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်စာတန်းထိုး application များအတွက်ဖြေရှင်းချက်စောင့်ကြည့်။ Wohler ရဲ့ RadiantGrid (TM) ပလက်ဖောင်းအကျိုးရှိစွာဖိုင်-based အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, မြန်အောင်လုပ် transcoding နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ထည့်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီ၏ဆုရထုတ်ကုန်လိုင်းများကိုတိုးချဲ့။ အတူတူ, Wohler ရဲ့အဆင့်မြင့်ဖိုင်-based ဖြေရှင်းချက်များနှင့်သက်သေပြ, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောယုံကြည်မှုစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ content စီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်မဆိုကိရိယာအရည်အသွေးမြင့်မီဒီယာမဆိုပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေအာမခံပါသည်။ Wohler နှင့် RadiantGrid ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.wohler.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-CarlDempsey-PresidentandCEO.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: သူ Carl ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ, Wohler မှာစီအီးအို
2014 NAB ပြရန် သူ Carl ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ အဆိုပါစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ IABM ပြည်နယ် NAB NAB ပြရန်, Las Vegas မှာ, Pamela Kleibrink Thompson က, Wohler Technologies က 2014-03-31
ယခင်: Digigram AoIP ဖြန့်ဖြူး codec IQOYA * စားသုံးခြင်း / LINK အခုတော့ 32 MADI စတီရီယိုလိုင်းများမှတက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် 32-ru အတွက် 1 စတီရီယို codec
နောက်တစ်ခု: Volicon စျေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ညီပြုမူကျင့်ကြံ, နှင့် 2014 NAB Show မှာ Observer Media ကိုထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းများအတွက် Applications ကို Monitor